5 akaturikidzana hwakawanda filtration
Kuramba kushoma, kugadzikana uye kufema
PFE95 lever kusefa
Yakagadzirwa nenzira uye yakaedzwa.
Izvo zvakasikwa zvikamu zvinochengetedza iyo
Rakaonda ganda remwana wako rakachena uye rakapfava.
Doro-isina: Inochengetedza hunyoro hwepanyama hweganda remwana.
Zvakanaka: Yekuchenesa kwemazuva ese kwemwana.
Vashandise: Pakuchinja kwese manapukeni, chimbuzi nemamiriro asingafanoonekwi.
3 akaturikidzana Filter Disposable Protective Mask
3 akaturikidzana rinoumba filtration
30 anopukuta anoshanda emafuta ekudzora anopukuta bvudzi nemusoro
Bvudzi uye Ganda Romusoro Kuchenesa Wipes ndeye isina-mushonga anoraswa maripisi anoshandiswa kuchengetedza ganda remusoro rakachena nemarara uye nemafuta akawandisa apo ichipa mavitamini akakosha kune vhudzi rakagwinya. Izvi zvinopukuta zvine antifungal uye antibacterial zvinoshandiswa uye zvinopa zororo kune rakaomarara ganda romusoro. Yakanakira kushandiswa pane yeganda uye vhudzi whiles akapfeka zvidziviriro zvekudzivirira senge machira uye kusona-mukati kana kudzivirira kuwedzeredza kuwanda.
Kurumidza kuchenesa makapu ekupukuta
Kicheni yekuchenesa unopisika ndiyo nzira iri nyore uye yakapusa yekuchenesa. Iyo ine yakasimba decontamination kugona uye inogona kunyatso shambidza ine oiri fume uye tsvina. Iko kupukuta kwakaomarara kunochenesa uye kunouraya 99% yehutachiona. Kurumidza uye nyore kushambidza maoko. Mahara emakemikari akaomarara.
Kuchenesa Pet Pet Kuchenesa Pet Wipes Paw Sanitizing Wipes
Imbwa yako inotsika weti uye nemhando dzese dzakashata "zvinhu" panguva yekufamba kwavo, ndokumhanya uchitenderedza imba yako, kusvetuka pamubhedha wako uye kumonera pamutsago wako. Zvakwana zvataurwa.
75% Doro Instant Antibacterial Gel Ruoko Sanitizer
Shamba Mota Dashibhodhi Yemukati Kuchengeta Auto Bharari Yakachena Wet Wipes Kwemota
Mishonga inorwisa mabhakitiriya inomutsiridza Yemukati vinyl, Rubha & Plastiki.
Mukati memota neDriver zvemukati zvinodzivirira svosve zvipukuta zvinobatsira kudzoreredza ruvara rwemota yako uye kupenya. Ivo vanochengetedza mukati memota yako kubva mukudzima, kutsemuka uye kuputika nekuda kwekunanga UV, ozone, oxidation uye yakanyanyisa kupisa tembiricha.